MIKAROSA IRIS F-35B Scimitar FA.2 FSX & P3D - Freeware
Ahitana maodely 6 sy firafitra 11. Ahitana koba virtoaly maoderina sy tontonana 2D. Ahitana feo manokana ihany koa, effet burner mahomby, sarimiaina marobe. Aza adino ny mamaky ny Boky Torolàlana.pdf.
Ny Lockheed Martin F-35 Lightning II dia iray fianakaviana amin'ny fanaovam-panavotana, mpitovo-maotera, fahadimy taranaka multirole mpiady eo ambany tany fampandrosoana ny hanao fanafihana, Reconnaissance, ary ny rivotra fiarovana asa fitoriana amin'ny voromby fahaizany. Ny F-35 manana modely telo lehibe; ny F-35A dia mahazatra ny fiaramanidina sy ny fipetrahana Variant, ny F-35B dia fohy hanala sy mijidina-fipetrahana Variant, ary ny F-35C dia mitondra-monina Variant.
Ny F-35 dia nidina avy tany X-35, ny vokatry ny Joint Fitokonana Fighter (JSF) fandaharana. JSF fampandrosoana no ho voalohany indrindra vatsian'ny ny United States, miaraka amin'ny Royaume-Uni sy ny mpiara-miasa hafa fitondram-panjakana manome famatsiam-bola fanampiny. Ny mpiara-miasa na firenena ireo mpikambana OTAN na akaiky mpiara-US. Izany dia efa natao ary nanorina ny iray mpahay siansa, orinasa ekipa notarihan'i Lockheed Martin. Ny F-35 nanatanteraka ny sidina voalohany tamin'ny Desambra 15 2006.
Mikasa ny hividy fiaramanidina 2,443 35 amerikana i Etazonia mba hanomezana ny ankamaroan'ny herinaratra taktika ho an'ny tafika amerikana, tafika an-dranomasina ary tafika an-dranomasina mandritra ny folo taona ho avy. Ny Fanjakana Mitambatra, Italia, Holandy, Aostralia, Kanada, Norvezy, Danemark, Torkia, Israel ary Japon dia ampahany amin'ny programa fampandrosoana ary mety hampitaovana ny serivisin'izy ireo amin'ny F-XNUMX (Wikipedia)
Noforonina 30 Nov 2012
Nohavaozina taminy 1 Dec 2012